Iwo manomwe Maitiro eSocial Employee | Martech Zone
Chitatu, November 6, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
NeMuvhuro, takagovana infographic kubva kuBlue Focus Marketing, Yako Brand sePlanet, kupa humbowo uye fananidzo yakapusa iyo inotaura kune simba rekushandisa vashandi vako kuti vabatsire kukura pasocial media tsoka yako. Izvo zvinopfuura kungodzokorodza chiratidzo chako, zvakadaro, sezvaunozoona mune yavo nyowani infographic.
Sezvatinotsanangura mubhuku redu reAmazon rinotengesa zvakanyanya, Mushandi Wezvemagariro: Makambani Makuru Akaita Sei Midhiya Yemashoko Kushanda, hakungave nekukanganisa kuti hukama hwebrands kune vese vatengi uye vashandi vari kuchinja. Munzvimbo yedhijitari, izwi chairo remushandi wezvemagariro rinogona kuve chinhu chakasimba kwazvo chechiratidzo mukuumba kwenguva refu, hukama hwakasimba nevatengi uye nedzimwe nhengo dzakakosha dzenzvimbo dzepamhepo.
Kubatirana kwevashandi, kuiswa kwavo kwebasa ravo mune vezvenhau, kuzvipira kwavo kukambani, kugona kwavo kubatana, hunyanzvi hwavo hwekuteerera, hunyanzvi hwevatengi uye kugona kwavo kuchinja shanduko musangano zvese hunhu hweanonakidza mushandi wemagariro. Iye zvino zvese zvaunoda kuti uite enda unovatsvaga!